शरीरमा भिटामिन ‘डि ‘को अभावले देखिन्छ यस्तो लक्षण, हड्डिमा गर्दछ यस्तो असर !
काठमाडौँ । भिटामिन ‘डी’ शरीरका लागि निकै जरुरी छ । यसले शरीरमा क्याल्सियम नियन्त्रित गर्ने काम गर्छ, जसले तन्त्रिकाको कार्य प्रणाली तथा हड्डीलाई मजबुती प्रदान गर्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
शरीरमा भिटामिन डीको कमीका लक्षण
शरीरमा भिटामिन डीको कमी भए के हुन्छ ?
फाउन्डेशन अनुहारमा लगाउँदा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ५ गल्ती ,…
यसभन्दा अघि गरिएका थुप्रै अध्ययनहरूमा समेत भिटामिन डी र रक्तअल्पत्रा बीच सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो । सोही अध्ययनका क्रममा यो पनि पत्ता लागेको छ कि भिटामिन डीको कमीले रातो रक्तकोषिकाको उत्पादनमा समेत असर पर्छ ।
शरीरमा भिटामिन ‘डी’को कमी हुन नदिन के गर्ने ?
-अन्नहरूमा पनि भिटामिन ‘डी’ भरपूर मात्रामा पाइन्छ । शरीरमा भिटामिन डीको पूर्तिका लागि दैनिक खानामा गहुँ, चना, मकै, जौ आदि अनाजलाई समावेश गर्न सकिन्छ।